September 13, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia News September 13, 2020
Ethiopia opens facility to make coronavirus test kits Washington PostSii akhriso
Somali News September 13, 2020
Mogadishu(SONNA)-President of the Republic of Somalia H.E Mohamed Abdullahi Farmajo has today chaired the opening session of the National Consultative Summit between the Federal Government of Somalia, The Federal member states and Banadir Regional Administration at the Presidential palace, Villa Somalia,SONNA reported. The opening of the summit was well attended by the Sii akhriso
Wasiir Sadiiq oo daah-furay wajiga labaad wareega 15–aad ee barnaamijka isxilqaan+Sawirro
Soomaaliya September 13, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Sii hayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Waraa ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha rayidka dowladda ay waajib ku tahay ka qeyb-galka barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka. Wasiirku waxaa kale uu sheegay in shaqaalaha dowladda lagula xisaabtamayo kaltanka ay uga Sii akhriso
Wasiir Goodax oo la kulmay Guddiga Dalladaha Waxbarashada Dalka+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):– Sii hayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta Sare Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta Wasaaradda waxbarashada guddiga dalladaha waxbarashada dalka. Kullanka ayaa ku saabsanaa dib-u-eegista iyo horumarinta waxbarashada iyo in ay dalladadaha ka qeyb-qaataan dadaallada ay Sii akhriso
Ankara(SONNA)-The International Union for Muslim Scholars (IUMS) on Sunday forbade any normalization of relations with the Israeli occupation authorities. In a statement, IUMS Secretary-General Ali al-Qaradaghi said normalization emboldens Israel to continue its decades-long occupation of the Palestinian lands. “Normalization with the occupiers of Al-Aqsa Mosque and Sii akhriso
Guddiga Maaliyadda Golah Shacabka Oo Maanta Kulan Yeeshay+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Guddiga maaliyadda,Miisaaniyadda,Qorshaynta iyo la- xisaabtanka Hay’addaha Dowladda ee golaha Shacabka ayaa waxa uu kulan Ku yeesheen xarunta Guddiyadda ee villa-Hargeysa. Kulankaan oo Ajandihiisu ahaa howlaha shaqo ee horyaalo guddiga iyo sidii ka shaqeyntooda mudnaan loo kala siin lahaa iyo sidoo kale xoojinta howlaha horyaala. Kulanka Waxaa Sii akhriso
Cayaaraha September 13, 2020
(Madrid) 13 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa naadiga Manchester United ee dalka England ku wargelisay qiimaha ay ku heli karto xiddiga ay doonayaan saxiixiisa ee Gareth Bale. Waxaa saaka soo baxay warar sheegaya in kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ay doonayso saxiixa Gareth Bale kaddib markii ay ku wareertay heshiiskiis ay ku […]Sii akhriso
(Barcelona) 13 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay si weyn u doonayso saxiixa xiddiga naadiga Liverpool ee Mohamed Salah. Jariiradda the Express ayaa warinaysa in Blaugrana ay weeraryahankan reer Masar ay ka dhigatay bartilmaameedkeeda ugu sarreeya suuqa kala iibsiga xiddigaha. Salah xiddiga ay ka wada tirsan yihiin Liverpool ee Sadio Sii akhriso
Ethiopia opens facility to make coronavirus test kits The Associated PressSii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Aqoon isweydaarsi ku saabsan ka hortaga fikirka xagjirka iyo maandooriyaha oo ay si wada jir ah usoo qabanqaabiyeen wasaaradaha Cadaaladda heer Federaal iyo heer Dowlad gobolleed ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubbaland. Madasha waxaa lagu casuumay culumada magalada Kismaayo,waxaana lagula taliyay culumada in ay doorkooda Sii akhriso